सम्पादकीय – News Of Nepal
मङ्लबार, जेष्ठ १०, २०७९ मा प्रकाशित
यस पटकको निर्वाचनमा भागबण्डाको खेल भएको पक्कापक्की नै हो । गठबन्धन भनेकै सोझो हिसाबले भन्ने हो भने भागबण्डा नै हो । त्यसैले यसपालीको भागबण्डाले नेकपा एमाले भन्दा अन्य दलहरुले राम्रै फाइदा लिएको मान्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस अघिल्लो पटक दोस्रो दल थियो भने यसपटक एमालेलाई दोस्रोमा पु¥याएर आफू पहिलो..
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आएका प्रचार शैली र देखाइएका व्यवहारहरु हेर्दा अचम्म लाग्नु स्वभाविक हो । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदा जनताको खेतमा पुगेर धान काटेको फोटोले चर्चामा आएका थिए केही नेताहरु । तत्कालीन अवस्थामा मंसिरमा निर्वाचन हुँदै गर्दा धान काट्ने समय..
सुन्दरकुमार थकाली हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा ५ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अध्यक्ष,उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षसहित कुल १३५ पदमा कुल २२६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।निर्वाचन आयोगले तोकेको आईतबार र सोमबारको समयअवधिमा पहिलोदिन २३ जना र दोश्रोदिन १०३ जनाको मनोनयपत्र दर्ता भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको..
अब कसको राजीनामा ?
बुधबार, बैशाख ७, २०७९ मा प्रकाशित
भन्ने चीजहरु फरक हुन्छन् तर भूमिका हेर्ने हो भने सबैको आ–आफ्नै स्थानमा उत्कृष्ट हुन्छ । यस्तै भूमिकाको हिसाबले हेर्ने हो भने मुलुक सञ्चालन गर्ने सरकार भन्दा पनि माथि हुन्छ केन्द्रीय बैंक अर्थात् राष्ट्र बैंक । राष्ट्र बैंक सरकारी निकाय अर्थात् सरकारी केन्द्रीय बैंक हो र पनि उ स्वायत्त निकाय पनि हो ।..
भोट माग्ने कहिले ?
मङ्लबार, बैशाख ६, २०७९ मा प्रकाशित
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आएको छ । २०७२ सालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । तत्कालीन अवस्थामा भएका विषम परिस्थितिहरु झेल्नका लागि कुनै दलले आँट नगर्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खरो रुपमा..
अहिले देश चुनावमा होमीएको छ । अहिले निर्वाचनको मुखमा आइ रहेको अवस्थामा एउटा निकै मजबुत सन्देश भने पक्कै पनि देखिएको छ । नेपालमा अव मात्रै एक दल मान्ने वा दुई भन्ने कन्फ्युजन भयो भन्दा खासै फरक नपर्ला । कुनै पनि दिनहरुमा हामीले सोच्ने कुराहरुले के कस्तो असर पार्छ भन्ने हुन सक्ला तर अहिलेको अवस्था..
क्यान, खेलाडी र प्रदर्शन
आइतवार, चैत्र २०, २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडौंमा जारी टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको प्रदर्शनलाई लिएर नेपाली समर्थक खुशी पक्कै छन् । किनभने नेपालले तीन देश सहभागी सिरिजमा भएको लिग चरणको चारवटै खेल जितेर फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ । नेपालले फाइनलमा पपुवान्युगिनी (पिएनजी)सँग उपाधिका लागि भिड्ने भएको छ । लिग चरणको खेलमा..
निर्वाचन, म्यादी र रोजगारी
बुधबार, चैत्र १६, २०७८ मा प्रकाशित
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकार केन्द्रीत भएको छ । निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगका साथै सबै तहका सुरक्षा निकायहरु तदारुकताका साथ बसेका छन् भने निर्वाचन तयारी पनि निकै अगाडि पुगिसकेको छ । निर्वाचनमा प्रयोग हुने मसी तथा पेपर खरिद गरेर मतपत्र छपाइतर्फ निर्वाचन आयोग..
मिसनः वैशाख ३०
अबको ४७औं दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिहरु गरिरहेको छ भने मतदाता नामावली पनि प्रकाशन भएको छ । पहिलो चरणको मतदाता नामावली संकलन बन्द भएर दावी, विरोधका लागि सूचना जारी भएको छ । अहिले पछिल्लो समय हेर्दा २०७७ पुस ५ गतेसम्म १८ वर्ष पुरा भएका..
शुक्रबार, चैत्र ११, २०७८ मा प्रकाशित
पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको एउटा घटना हो नेपाली सिने क्षेत्रका चर्चित नाम पल शाह मुछिएको बलात्कार घटना । एक नाबालिकासँग शारिरीक सम्बन्ध राखेको भन्दै कुनै समय दिएको अभिव्यक्ति र उनले बालिकालाई दिएका धम्की अनि अरु पनि त्यस्तै घटनाहरुसँग जोडिएको प्रसंग । अहिलेको अवस्थामा हेर्दा नेपालको कानुनले नै..